dimanche, 22 décembre 2019 22:33
Tafika Malagasy: Hapetraka eny Arivonimamo ny « Académie de l’air »
Hapetraka tsy ho ela eny Arivonimamo ny « Académie de l’air » eo anivon’ny Tafika Malagasy. Nivoitra io nandritra ny lanonana fanehoana ambany faneva an’ireo mpianatra andiany mivantana faha-43 izay miisa 77 mianadahy, sy ireo mpianatra ho manamboninahitra mpanamory 20 mianadahy ny sabotsy 21 desambra 2019, tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe rehefa nahavita ny fiofanana ara-miaramila fototra nandritry ny 45 andro.
Miisa 20 mianadahy ireo mpanamory, izay voalohany nofanina teo anivon’ny Tafika Malagasy.
Nahazo isa 10 tamin’ny lalao efatra vitany, ka fandresena telo sy ady sahala iray. Izay vokatra izay no nitondra ny Barea Madagasikara sokajy zazavavy latsaky ny 20 taona, ho tompondakan’ny UFFOI (Union des Fédérations de Football de l'Ocean Indien) taona 2019 nandritra ny fifaninanana natao tatsy amin’ny nosy Maorisy.
Vondrona tokana no nisy ireo nosy dimy nandray anjara, ka teo amin’ny laharana faharoa taorian’i Madagasikara i La Réunion, fahatelo i Mayotte, fahaefatra i Maorisy mpampiantrano, ary fahadimy ny nosy Rodrigues. Tsy nandray anjara i Seychelles.
dimanche, 22 décembre 2019 22:08
Lakandranon'i Pangalana: Vinavinaina ho vita amin’ny febroary 2020 ny asa fanamboarana
Ny 14 septambra 2019 no nanomboka ny tetik'asa fanamboarana lakandranon'i Pangalana mirefy 639 km miala an'i Toamasina mankany Farafangana.
Vinavinaina ho vita amin’ny febroary 2020 ny asa fanamboarana, hoy ny APMF izay atokon-draharaha misahana ny fifamoivoizana an-dranomamy sy an-dranomasina, ka ny 81% amin’io halaviran-dalana io dia ho an'ny sambo mitaky haavon-drano 80 sm.
Ambohi-pihaonan’ireo mitaky ny fampitahana ny lisi-pifidianana voasonian’ny mpifidy nifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny 27 mey 2019 sy ny lisi-pifidianana voasonian’ny mpifidy nifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina tamin’ny 27 novambra 2019, etsy amin’ny Magro Behoririka omaly sabotsy 21 desambra.
Amin’ny alalan’io fampitahana lisi-pifidianana io no hivoahan’ny marina mikasika ny fifidianana natao farany teo, ary hampisinda ny ahiahy rehetra, hoy ireo mpitarika nifandimby naneho hevitra.
dimanche, 22 décembre 2019 20:49
Seranam-piaramanidina: 54 ankehitriny ireo tantanin'ny ADEMA
Iray amin’ireo seranam-piaramanidina miisa 54 tantanin'ny ADEMA ny aty Tolagnaro.
dimanche, 22 décembre 2019 19:39
Rakotoniaina Lova: « Diso ny filazana fa hanala ny mpianatra eny amin’ny « cité U » ny ministera »
« Diso tanteraka ny filazana fa mieritreritra ny hanala ny mpianatra amin’ny tranony eny amin’ny « cité U » ny ministera mpiahy », hoy Rakotoniaina Lova, filohan’ny filankevi-pitantanana ao amin’ny CROU-A nitondra fanazavana mahakasika ny fitokonana nataon’ny mpianatra teny amin’ny anjerimanontolo.
Nambarany fa « misy ny fikasan’ny minisitera hanangana trano vaovao manara-penitra. Rehefa vita izany, dia ho afindra ao ireo mpianatra manana taratasy ara-dalàna izay mipetraka amin’ny trano tranainy, mba ahafahana manamboatra sy manavao ireo trano tonta ireo indray. Ireo mipetraka amin’ny trano, nefa tsy manana taratasy ara-dalàna kosa dia hodinihina manokana ny momba azy ireo sy ny antony tsy maha ara-dalàna azy ».
dimanche, 22 décembre 2019 19:18
Sambava: Voasazy enin-taona an-tranomaizina ny Ben'ny tanàna teo aloha
Tontosa ny talata teo ny fitsarana ny Ben'ny tanànan'i Sambava teo aloha, Toto François dit GIDA, izay tohin'ny nanenjehana azy tamin'ny septambra 2018 amin'ny fanodinkodinana volam-panjakana ka nampidoboka azy vonjy maika tany amin'ny fonja Antalaha.
Nangataka fahafahana vonjy maika izy taorian'io tamin'ny septambra io ka nahazo ary nilatsaka indray mandeha ho kandida Ben'ny tanàna tamin'ny 27 novambra 2019 teo iny izay nilazany nandritra ny fampielezan-kevitra fa ity aho nilatsaka ho porofo fa tsy meloka.
Zao anefa nivoaka ny didim-pitsarana manameloka azy enin-taona an-tranomaizina sazy mihatra. Manefa sazy ao amin'ny fonjan'Ambatoratsy Antalaha i Gida ankehitriny.
dimanche, 22 décembre 2019 19:15
Didy hitsivolana mifehy ny tetibola 2020: Nankatoavin’ny HCC
Namoaka didy laharana faha 18-HCC/D3 ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny 21 desambra 2019 mampanankery ny didy hitsivolana laharana faha 2019-016 mifehy ny fitantanam-bola 2020.
Lavon'ny GNBC, ekipan'ny Zandarimariam-pirenena Malagasy, tamin'ny isa 94 noho 90 teo amin'ny manasa-dalana omaly sabotsy 21 desambra ny Clube Ferroviario de Maputo avy atsy Mozambika. Tafita hiatrika ny famaranana amin'ny Afroleague faritra atsinanana ny GNBC.